Yakakwira Mhando Fekitori inopa Triphenylphosphine oxide TPPO CAS 791-28-6 ine mutengo wakanaka Mugadziri uye Mutengesi | Zhuoer
Factory inopa Triphenylphosphine oxide TPPO CAS 791-28-6 nemutengo wakanaka
Hwakanaka Hunhu & Kurumidza Kuendesa & Kugadziridza Service
Triphenylphosphine oxide (inowanzo pfupikiswa TPPO) inhengo yeophophophophophophoma ine fomula OP (C 6 H 5) 3, yakanyorwawo sePh 3 PO kana PPh 3 O (Ph = C 6 H 5). Ichi chisina ruvara chemakristalline chinowanzoitika asi chinogona kubatsira chigadzirwa chemarara mukugadzirisa kunosanganisira triphenylphosphine.
Nzvimbo yakanyunguduka 150-157 ° C (yakavhenekerwa.)
Nzvimbo yekubikira 360 ° C
kuwanda 1,212 g / cm3
fomu Crystalline Powder kana maFlakes
ruvara Muchena kusvika ku pink-brown
Unyanzvi Dhata Sheet / TDS:
Chitarisiko Kunze chena kana kujena yero kristaro poda
Zvemukati (GC) ≥98%
Kurasikirwa pakuoma ≤0.5%
Triphenylphosphine Oxide (Orlistat USP Yakabatana Komputa C) inokonzeresa mukutendeuka kwealdehydes kuita 1,1-dichlorides. Triphenylphosphine oxide inoshandiswa senzira yekukonzeresa kuti ishandiswe yakasimbaα-CF3 γ-keto esters.
Triphenylphosphine oxide ndeye phosphine ligand inoshandiswa pakubatanidza maitiro, epoxidations, uye Michael reaction
Triphenylphosphine oxide (TPPO) inogadzirisa solvent inoshandiswa kugadzira crystallization yemakemikari makemikari. Yakave ichishandiswa mumoto unodzora mashandisiro, se epoxy kurapa chinokonzeresa, uyezve munguva pfupi yapfuura, kugadzira nanostructures.
Ndingaite sei kutora Triphenylphosphine oxide TPPO CAS 791-28-6?
T / T (telex transfer), Western Union, MoneyGram, BTC (bitcoin), nezvimwe.
≤25kg: mukati memazuva matatu ekushanda mushure mekubhadharwa kwebhadharo.
＞25kg: vhiki imwe
10g / 100g / 200g / 500g / 1kg / 25kg kana sezvaunoda.
Chengetedza mudziyo wacho wakavharwa zvakasimba munzvimbo yakaoma, inotonhorera uye ine mweya wakakwana.
Pashure: Yakachena kuchena Steroids Nandrolone Decanoate CAS 360-70-3 nemutengo wakanaka
Zvadaro: Yakachena Yakachena 98% Palmitoleic acid cas 373-49-9 nemutengo wakanakisa
Factory zvitengeswa Uridine 5-diphosphate disodium S ...
Factory mutengo Hydroxyl-yakagumiswa polybutadiene ...
Yakachena kuchena 99% Olivetol / 3,5-hydroxypentylbenze ...
Factory zvitengeswa Arufa-Chloralose CAS 15879-93-3 ...